Khilaaf ka jira doorashooyinka dalka Ethiopia - Jowhar Somali news Leader
Home News Khilaaf ka jira doorashooyinka dalka Ethiopia
Khilaaf ka jira doorashooyinka dalka Ethiopia
Ismaamulka Tigrey ee dalka Ethiopia ayaa ku adkeysanaya inay qabtaan doorashada baarlamaanka ismaamulka Tigrey oo dhacaysa arbacada soo socota, iyagoo iska dhega tiraya go’aanka dowlada federalka ee joojinaya in la qabto doorashoyinka sanadkan.
Hase yeeshee dowlada federalka Ethiopia iyo inta badan xisbiyada mucaaradka ayaa oggolaaday in dib loo dhigo doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer qaran ee lagu waday inay dhacaan bishii August ee sanadkan sababo la xiriira cudurka safmarka ee COVID-19.
“Waxaan ognahay in Abiy uu diidan yahay in ay dhacdo doorashadan lagana yaabo in si milatari ah u farogeliyo amaba uu dhaqaalaha jarto balse waan qabanaynaa doorashada.”ayuu yiri Getachew Reda oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta dowlada federalka Ethiopia haddana ah afhayeenka jabhada xoreynta Tigray.
Majiro ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay dowlada federalka Ethiopia balse afhayeenka xukuumada Ethiopia ayaa sheegay in arrintan ay u taal baarlamaanka Ethiopia.
Tigray oo ah gobol ku yaal waqooyiga Ethiopia ayaa ah dad aad u yar marka loo eego tirada dadka ku nool wadanka Ethiopia oo tiradoodu gaareyso 110 malyan balse waxa ay maamulayeen dalkaasi tan iyo sanadkii 1991kii.